ဆိုင်မွန် (ကျန်းမာရေး): Uric acid များတဲ့ သူတွေ ရှောင်သင့်သော အစားအစာများ နှင့် စားသင့်သော အစားအစာများ ဆိုင်မွန် (ကျန်းမာရေး): Uric acid များတဲ့ သူတွေ ရှောင်သင့်သော အစားအစာများ နှင့် စားသင့်သော အစားအစာများ
ပထမ အနေနဲ့ Uric acid (ယူးရစ် အက်ဆစ်) များရင် ဘာဖြစ်တတ်လဲ ကို အရင်ပြောပြပေးပါမယ်။ အဓိက ကတော့ အဆစ်အမြစ်ရောင်တဲ့ ရောဂါ ၊ ဆေးပညာ အရ Gout (ဂေါက်) ရောဂါလို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခု အဖြစ်များတာက တော့ ဆီးကျောက် တည်တာပါ။ အသေးစိတ် ကိုတော့ သက်ဆိုင်ရာ အထူးကုတွေ က ရှင်းပြပေး ပါလိမ့်မယ်။
အခု ကျွန်တော် Uric Acid များတဲ့ သူတွေ ဘာတွေ စားသင့်လဲ။ ဘာတွေ ရှောင့်သင့်လဲ ကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
သတိနှင့် စားသင့်သည့် အစားအစာများ
1. ဝမ်းတွင်းကလီစာ – ဥပမာ – အသည်းအမြစ်၊ နှလုံး၊ ဦးနှောက်။
2. အနီရောင်ရှိသော အသားများ – ဥပမာ – အမဲသား၊ ဆိတ်သား။
3. ပင်လယ်စာ များ၊ ငါးသေတ္တာငါး အစရှိတဲ့ အစားအစာ တွေ ပာာ Purine လို့ခေါ်တဲ့ ဓါတ်တစ်မျိုး အမြောက်အမြားပါတဲ့ အတွက် Uric Acid ကို ပိုများစေပါတယ်။
4. တစ်နေ့ကို အသင့်သောက် အချိုရည် ၆ဘူး အထက်သောက်တဲ့ သူတွေ မှာ လည်း Uric Acid တွေများနေပါတယ်။ အကြောင်းအရင်း ကတော့ အချိုရည် တွေ မှာပါတဲ့ သကြားတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Fructose (ဖရက်တို့စ်) ကြောင့်ပါ။
5. အရက် အလွန်အကျွံသောက်တာ ကိုလည်းရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။
6. ကော်ဖီ ကိုလည်း တစ်နေ့ ၂-၃ ခွက်ထက်မပို သင့်ပါဘူး။
7. ပဲပုပ်စေ့၊ ကုလားပဲ စတဲ့ ပဲတွေမှာတော့ purine ပါဝင်မှု့ များတဲ့ အတွက် အလွန် အကျွံ မစားမိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
8. ဗီတာမင် စီ နှင့် ဒီ ပါဝင်သော အားဆေးများကို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ကြဉ် ရပါမယ်။ ဆီးကျောက်တည်တာ ကို ပိုဆိုးစေလို့ပါ။
9. အသီးအရွက်ထဲ မှာဆိုရင် ပာင်းနုနွယ်၊ ကညွတ်၊ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ မှို တွေကို အများကြီး မစား သင့်ပါဘူး။
Purine ပါဝင်မှု နည်းသော အစားအစာများ (စားသင့်သော အစား အစာများ)
ရေများများသောက်ပေးပါ။ ဒါမှ ကျောက်ကပ်က Uric Acid တွေ ကို ဆီးနဲ့ အတူ စွန့်ထုတ်ပေးနိုင်မှ ဆီးကျောက်တည် တာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာပါ။ ထို့အပြင် သွေးတွင်း Uric acid ပမာဏ ကို လည်း ကျစေပါတယ်။
အသီးတော်တော် များများ က purine ဓါတ်ပါဝင်မှု နည်းတဲ့ အတွက် စားသင့်ပါတယ်။
အဆီထုတ်ထားတဲ့ နို့သောက်ပေးပါ။ ဒါပေမယ့် နို့ထဲ မှာ ဗီတာမင် ဒီ (D) ထပ်ထည့် ထားတဲ့ နို့ဆို ရှောင်သင့်ပါတယ်။ ဆီးကျောက်တည်တာ ပိုဆိုးစေ တတ်လို့ပါ။
ပေါင်မုန့်၊ ထမင်း၊ အီတလီခေါက်ဆွဲ (Pasta, Spaghetti)
From : ကုမုဒြာဂျာနယ် by Dr. Nutrition @ဒေါက်တာ ညီညီကျော်
Posted by Te Tee at 3:32 AM